Nwere ike ịhụ foto 3D nke Apple Park na Apple Maps | Esi m mac
Nwere ike ịhụ foto 3D nke Apple Park na Apple Maps
Otu n'ime nkatọ a na-eme site na map Apple bụ enweghị ọdịnaya ma e jiri ya tụnyere onye isi ya, Google Maps. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụrụ na a gụnyere nsonye Apple Park, anyị nwere ike ikwu na Apple nọ n'ogo nke onye ọ bụla na-ama ya aka. Naanị anyị ga-enweta maapụ Apple, chọọ Apple Park ma họrọ nhọrọ Apple Park na Cupertino.
Ọ dị mkpa ịhọrọ nhọrọ maapụỌfọn, ọ bụrụ na anyị agbanwee satellite, anyị ga-ahụ onyonyo nke oge gara aga, na mpaghara nke ụlọ ahụ ka agwụbeghị.
Nnukwu nkọwa anyị nwere ike ịchọta na 3D nsụgharị, nke dị adị ozugbo anyị pịa bọtịnụ dị n'okpuru aka nri. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịhụ n'ụzọ zuru ezu: ln'ụdị ụlọ, okporo ụzọ na ngwa ndị ọzọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike ịkọwa n'ụzọ zuru ezu ogwe igwe nke isi ulo.
Nkọwa nke nnọchi anya na-aga n'ihu na nkọwa nke ụzọ dị n'etiti ụlọ dị iche iche. Anyị na-ahụ, na mgbakwunye na isi ụlọ, ụlọ maka ebe a na-adọba ụgbọala, nke dị nso n'okporo ụzọ awara awara 280, ihe nnọchianya ahụ Steve Jobs aterlọ ihe nkiri na okporo ụzọ jikọtara ụfọdụ ụlọ na ndị ọzọ. Ruo a obere ọdọ n'ime isi ụlọ yiri mgbanaka.
N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na ejikọtaghị ya na Apple, gburugburu ụlọ akwụkwọ Apple ọhụrụ gbara ụlọ nri nri ngwa ngwa gbara ya gburugburu. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eche na agụụ na-agụ mgbe ịga Apple Park, ị nwere ike fanye batrị gị mgbe nile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nwere ike ịhụ foto 3D nke Apple Park na Apple Maps
Jiri igwe ojii jiri igwe ojii gi wuo igwe ojii nke gi
Matthew Roberts 'ụgbọ elu na-efe efe na-egosi ọba na Apple Park